Endgame 'khalad weyn ayuu leeyahay qofkastaba wuu seegay - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo Endgame wuxuu leeyahay khalad aad u weyn oo qofkastaaba uu seegay - BGR
Endgame 'khalad aad u weyn ayuu leeyahay oo ku dhawaad ​​qof walba seegay - BGR
TELES RELAY 29 August 2019
Nooca dhijitaalka iyo midka casriga ah ee Rakaabka: Dhamaan ayaa la heli karayay dhowr toddobaad hadda, iyadoo la siinayo taageerayaasha MCU habka ugu fiican ee ay ugu raaxeystaan ​​filimka mar labaad. Hadda oo aad ogtahay waxa Rakaabka 4 iyo in aadan la yaabayn doonin qallooca shucuurta, waxaad diiradda saari kartaa dhammaan ukuntayada cajiibka ah ee Easter of Endgame oo qaarkood aan laga helin tiyaatarada. Waa inaad awood u leedahay inaad qaboojiso sawirka shaashadda si aad u guuleysato in qof laga yaabo inuu ku xadgudbay xariirka saacadda tusaale ahaan. Isla sidaas ayaa loo marayaa mid kale Ukun Easter ka duwan taas oo ah wax aan la arki karin xitaa ka dib markaad joojiso akhriska
. wax walbana way ka maqnaayeen, laakiin hadda waa la ogaaday. Si kastaba ha noqotee, waa inaan kaaga digaana inaadan ogaan karin mar haddii aad ogaato inuu jiro.
Aynu waxwalba ku bilowno muuqaalka dagaalka halyeeyada ah Dagaalkii Infinity On Titan, halkaas oo Thanos isku dhacay dhowr Avengers iyo Mas'uuliyiinta. ka hor intaadan qaadan dhagxaanta wakhtigii Dr. Strange isla markaana u safray Wakanda.
In kasta oo xaqiiqda ah in Strange iyo Co. ay abaabulaan dagaal weyn, Thanos aad ayuu uga awood badnaa iyaga, iyada oo la tixgelinayo in uu horay u haysto afar dhagax oo 'Infinity Stones' ah. Qasdi baa isku dayey inuu ilaaliyo dhagaxa waqtiga, laakiin ugu dambeyntii waa inuu baxo si uu u badbaadiyo nolosha Tony Stark. Thanos wuxuu burburiyey isha Agamoto, farshaxanimada sixirka ayaa loo adeegsaday inuu qariyo dhagarta waqtiga.
Hoos ka daawo shaxda soo socota:
Dr. Qasab ma aha inuu xirto qoorta qoorta waqti kasta oo gudaha ah Endgame laakiin waxaa jira goob ay xaqiiqadu tahay. Tani waa goobta muujineysa dadweynaha dhammaan horjoogayaashii hore ee ka gudbay irdaha magaalada New York.
Waxay u muuqataa in dadka qaar ay iloobeen in Strange uu ku lumiyay farshaxanka dagaalkii hore maxaa yeelay qadaadiicii wali qoorta ayuu saaran yahay. Waa qalad sahlan in la sharraxo maadaama Marvel uu gadaal u jeestay Dagaalkii Infinity et Endgame . Marka la eego isku dhafka qorshaha iyo qarsoodiga qarsoodiga, way fudeysaa qofkasta inuu khaladkaas sameeyo. Sidoo kale way fududahay dadweynaha inaysan ka warqabin waxa dhacaya iyadoo la tixgelinayo inay tahay waqtigii la aflagaadeyn lahaa. Waan arkay Endgame marar badan oo waligeey maan arkin. Taasi waa sababta oo ah kooxda Strange waa mid aad u qurux badan oo aad ka fileyso inuu ku xiro Agamoto Eye Eye qoortiisa. Waad ogtahay in farshaxanku aanu ku jirin muuqaallo kaamirooyinku ay ku qaataan waqti badan Straw. Dabcan meesha ma yaalaan… relic wuu burburay.
Hadda oo aan ognahay, ma awoodi doonno inaan ogaanno. Marvel waxaa laga yaabaa inuu rabo inuu xalliyo dhibaatada nooca filimka dijitaalka ah, inkasta oo tani ay tahay muuqaal joogto ah oo Blu-ray ah oo horeyba loo iibiyay. Horraantii sanadkan, Game of Thrones wuxuu ahaa bartilmaameedka khaladaadka culus, joogitaanka koob kafeega Starbucks oo ka mid ah masraxa Winterfell. HBO ayaa cutubka ka gooyay nambar ahaan kadib, kadib markii uu si qalad ah u qirtay qaabkii nus kaftanka ah.
"Arkham Knight" iyo "Darksiders III" waa ciyaaraha PS Plus ee bilaashka ah ee Sebtember - BGR
Kuwani waa kuwa ugu daawashada badan ee 15 muujinaya toddobaadkan laga bilaabo Netflix, HBO, Amazon iyo inbadan - BGR